Ihe ise kacha ise emere na saịtị Ecommerce | Martech Zone
Otu n'ime ọnụ ọgụgụ na-atụ ụjọ banyere COVID-19 na mkpọchi bụ mmụba dị egwu na ọrụ e-azụmahịa:
COVID-19 emeela ngwa ngwa nke azụmahịa e-commerce, dị ka akụkọ Adobe wepụtara taa. Ngụkọta nke mmefu n'ịntanetị na Mee kụrụ ijeri $ 82.5, elu 77% kwa afọ.
John Koetsier, COVID-19 Accelerated E-Commerce Growth '4 Ka 6 Afọ'
Enweghị ụlọ ọrụ na-emetụbeghị… nzukọ gara nke ọma, ụlọ akwụkwọ kwagara na njikwa mmụta na ntanetị, ụlọ ahịa kwagara na nnara na nnyefe, ụlọ oriri na ọ addedụ addedụ gbakwunyere na-apụ, na ụlọ ọrụ B2B gbanwere ahụmịhe ha na-azụ ahịa iji nye atụmanya na ngwaọrụ. iji jeere onwe ha ozi na azụmahịa ha n'ịntanetị.
Uto E-commerce na Nchekwa Nchebe
Dị ka ọ bụla uka doro, ndị omempụ na-eso ego… na e nwere ọtụtụ ego na e-azụmahịa wayo. Dabere na Nkà mmụta sayensị, mpụ cyber ga-ebute ihe karịrị ijeri $ 12 na 2020. Dika ulo oru ohuru na-aga ire e-commerce, odi nkpa ka ha tinye nche na ntughari ha… tupu o ghaara ha ahia ha.
Top 5 E-azụmahịa Mmegide
Nweta Akaụntụ (ATO) - makwaara dị ka akaụntụ nchịkwa nke wayo, ATO bụ ihe ruru 29.8% nke ọghọm aghụghọ niile. ATO na-enweta nzere nbanye onye ọrụ iji weghara akaụntụ ịntanetị. Nke a na-enyere ha aka inweta data kaadị kredit ma ọ bụ jiri ihe akaụntụ onye ọrụ zụta ihe na-enwetaghị ikike. ATO wayo nwere ike iji ihe ederede akpaghị aka na-abanye nzere ma ọ bụ bụrụ mmadụ na-ede ha na ịnweta akaụntụ ahụ. Enwere ike ịnye iwu na adreesị nnyefe elebara anya ebe eburu ma were ma ọ bụ ree ya maka ego. A na-erekarị aha njirimara na paswọọdụ n'ọtụtụ ma ọ bụ na-ere ahịa n'ọma ahịa Weebụ Ọchịchịrị. N'ihi na ọtụtụ mmadụ na-eji otu nbanye na paswọọdụ, edebanye aha iji nwalee aha njirimara na okwuntughe gafee saịtị ndị ọzọ.
Nkpuchi Chatbot - bots na-aghọ ihe dị oke mkpa nke saịtị e-commerce maka ndị ọrụ itinye aka na ụlọ ọrụ ndị ahụ, na-agagharị site na azịza ọgụgụ isi, na ịgwa ndị nnọchianya okwu ozugbo. N'ihi na ha ewu ewu, ha na-na a lekwasịrị anya na-akpata 24.1% nke niile wayo ọrụ. Ndị ọrụ enweghị ike ịchọpụta ọdịiche dị n'etiti nkata nkata ziri ezi ma ọ bụ nke jọgburu onwe ya nke a ga-emepe na ibe ahụ. Iji adware ma ọ bụ injections web script injections fraudsters nwere ike igosipụta mmapụta chatbot wee wepu ozi dị nro site na onye ọrụ dịka ha nwere ike.
Faịlụ Backdoor - Ndị omempụ Cyber ​​wụnye malware na saịtị e-commerce gị site na isi ntinye ntinye, dịka nkwụnye ihe mgbe ochie ma ọ bụ ogige ndenye. Ozugbo ha banyere, ha nwere ike ịnweta data ụlọ ọrụ gị niile, gụnyere ozi njirimara nke ndị ahịa (PII). Enwere ike ire ma ọ bụ jiri data ahụ nweta ohere ịnweta akaụntụ onye ọrụ. 6.4% nke mwakpo niile bụ mwakpo faịlụ faịlụ.
SQL ịgba ntụtụ - ụdị ntanetị, URL querystrings URL, ma ọ bụ ọbụna chatbots na-enye isi ntinye data nke nwere ike ghara ime ka obi sie ya ike ma nwee ike inye ọnụ ụzọ ámá maka ndị na-egwu egwu ịjụ ajụjụ nchekwa data. Enwere ike iji ajụjụ ndị ahụ iji wepụ ozi nkeonwe site na nchekwa data ebe ejiri saịtị saịtị ahụ. 8.2% nke mwakpo niile bụ ihe ejiri SQL gbaa.
Akwụkwọ Cross-Site (XSS) - Mwakpo XSS nyeere ndị mwakpo aka ịtinye ederede site na ihe nchọgharị onye ọrụ na ibe weebụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ lere anya. Nke a na - enyere ndị na - egwu ha ụzọ agafe njikwa njikwa na ịnweta ozi njirimara nke onwe (PII).
Nke a bụ nnukwu ihe omuma sitere na Science Signal na Rsọ Egwu E-commerce Na-arịwanye Elu - tinyere usoro, usoro, na usoro ịgbachitere ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịma ma tinye ya na atụmatụ ọ bụla e-commerce.
Tags: akaụntụ imposternjikwa akaụntụmwakpo akaụntụakaụntụ nchịkwa nke wayoatobackdoorcross-saịtị scriptingmpụ cybere-azụmahịae-commerce ọgụ ọnụ ọgụgụe-commerce wayo agbachiteree-commerce usoro aghụghọe-commerce aghụghọ aghụghọecommerce aghụghọnchekwa ecommerceigwu wayo n'ịntanetịnchekwa cyber nchesecurityotu sayensịogwu ogbugba sqlmbuso agha kacha elu site na mbamwakpo weebụ